Sida loo sameeyo lacag ganacsi ikhtiyaari ikhtiyaari ah haddii aad tahay bilow? | vfxAlert official blog
Qaamuus gaaban oo ku saabsan shuruudaha aasaasiga ah ee ikhtiyaarrada binary
Tiro aad u badan oo dad ah oo adduunka ah ayaa ku hawlan ganacsi, laakiin in ka yar 10% iyaga ayaa si xirfad leh u sameeya. Rabitaan la'aanta in la barto, la'aanta aqoonta aragtida dugsiga hoose waa dammaanad guuldarada xirfadda ganacsadaha bilowga ah. Kuwa dhab ah oo ku saabsan ganacsiga binary oo ku dadaalaan si ay u gaaraan yoolalkooda iyada oo loo marayo shaqo adag oo adag maareeyaan in ay sii joogaan top.
Halkee laga bilaabayaa bilawga? Ku bilow safarkaaga adigoo baranaya ereyo caadi ah, fikrado, iyo qeexitaanno aasaasi ah oo ikhtiyaari ikhtiyaari ah ganacsiga .
Waxaan ku siinaynaa qaamuus gaaban oo ku saabsan shuruudaha aasaasiga ah ee ikhtiyaarrada binary .
Ikhtiyaarka binary waa qandaraas dhijitaal ah oo leh faa'iido go'an, kaas oo u maleynaya in dhinac uu siin doono dhinaca kale qaddar lacag ah oo la sii cayimay haddii saadaasha maaliyadeed ee hanti gaar ah la fuliyo ka dib muddo go'an. Ikhtiyaarada binary waxay ku siinayaan fursad aad isla markiiba ku aragto xajmiga faa'iidadaada ama khasaarahaaga la filayo, sidoo kale, ganacsatadu waxay xaq u leeyihiin inay doortaan wakhtiga lagu fulinayo doorasho gaar ah.
WAC - xaalad ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ay tahay in qiimaha hantidu kordho. Haddii aad u malaynayso in qiimaha hantida hoose uu sare u kici doono, dooro shardiga WAC.
PUT waa xaalad ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ay tahay in qiimaha hantidu hoos u dhaco. Haddii aad u maleyneyso in qiimaha hantida hoose uu hoos u dhici doono, dooro xaaladda PUT.
Hantidu waa qalab maaliyadeed oo ganacsi , kaas oo ganacsatadu sameeyo saadaal. Waxaa jira hantida ugu muhiimsan ee soo socota ee ikhtiyaarrada binary: lammaane lacageed, kaydka shirkadaha caalamiga ah, badeecooyinka, iyo tusmooyinka. Markaad dooranayso hanti, waxaa muhiim ah in si sax ah loo xisaabiyo dhaqdhaqaaqa mustaqbalka ee qiimihiisu, taas oo macnaheedu yahay, si aad u sameyso saadaal sax ah oo aad hesho faa'iidadaada.
Lammaanaha lacagtu waa mid ka mid ah hantida ugu caansan ee ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee ganacsiga . Lamaanaha lacagta waxaa lagu soo gaabiyaa laba qaybood oo lacag ah, oo tan ugu horreysa loo yaqaan 'base currency', tan labaadna waa lacagta la soo xigtay. Tusaale ahaan, lacagta EURUSD ee lammaane, lacagta saldhigga ah waa EUR oo laga soo xigtay USD.
App-ka vfxAlert waxa uu soo saara calaamadaha forex-ka ugu caansan iyo lammaanaha lacagta cryptocurrency. Habbee filtarrada si sahlan loo falanqeeyo hantida loo baahan yahay ee goobaha codsiga.
Calaamaduhu waa talo-bixin saadaalineed oo ku salaysan xogta tirakoobka iyo taariikhda. Ganacsatadu waxay isticmaalaan calaamado si ay u xaqiijiyaan istiraatijiyaddooda sidii qalab falanqayn dheeraad ah .
Qaab dhismeedka shaqada badan ee calaamada vfxAlert waxa uu ka kooban yahay dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah samaynta go'aanka saxda ah, oo ay ku jiraan xogta tirakoobka ee guusha calaamadaha la midka ah waagii hore.
Qiimayntu waa qiimo lagu bixiyo lacagta la soo xigtay si loo iibsado hal unug oo lacagta saldhiga ah. Xigashada waxaa lagu tilmaamay magaca lamaanaha lacagta ka dib "=" calaamadda. Tusaale ahaan, xigashada EURUSD = 1.1600 ee erayada fudud waxay la macno tahay inaad iibsato hal euro, waxaad u baahan tahay inaad bixiso $ 1.16.
Dhibicdu waa halbeegga isbeddelka qiimaha hantida. Tusaale ahaan, marka ay yiraahdaan EURUSD = 1.1600 ayaa kor u kacay hal dhibic, tani waxay ka dhigan tahay EURUSD = 1.1601
Qiimaha shaqo joojinta waa qiimaha hantida wakhtiga iibsashada ikhtiyaari ikhtiyaari ah , kaas oo jihada dheeraadka ah ee qiimaha lagu xisaabin doono.
Kalfadhiga ganacsiga - waqtiyada kala duwan ee ganacsiga sarrifka ah ee ka dhaca qaaradaha kala duwan. Kala saar fadhiga ganacsiga Mareykanka, Yurub, Aasiya, Baasifigga. Ogaanshaha jadwalka kalfadhiyada ganacsigu waa shardi u ah ganacsiga guuleysta sababtoo ah gobol kasta oo ka mid ah kalfadhiga ganacsigu wuxuu leeyahay saameyn ka duwan suuqa waqti go'an. Iyadoo la tixgelinayo sifooyinka ku-meel-gaadhka ah waxay suurtogal ka dhigaysaa in la kordhiyo faa'iidada istaraatiijiyadda ganacsiga , dooro hantida saxda ah kana fogaato khasaaraha aan loo baahnayn
Waqti go'an waa wakhti lagu kooxeeyo qiimayaasha hantida si loo abuuro qaybta ugu yar ee jaantuska qiimaha. Qaybaha ugu yar, inta badan baararka ama shumacyada, ayaa loo isticmaalaa si ay u muujiyaan dhaqdhaqaaqa qiimaha jaantusyada tooska ah. Tusaale ahaan, wakhtiga M1 waxa uu tilmaamayaa in ay qaadanayso 1 daqiiqo in la sameeyo hal shumac
Shumaca ama baarka waa canaasiir ka mid ah jaantuska intarneedka oo muujiya macluumaadka ku saabsan sida xigashooyinka isu beddelayaan. Waxay yihiin tilmaamayaasha falanqaynta farsamada ugu fudud ee u oggolaanaya ganacsadaha inuu falanqeeyo dhaqdhaqaaqa qiimaha muddo cayiman. Farqiga u dhexeeya shumaca iyo baarka waa kaliya sawirka qaybta garaafka. Waxay ka kooban yihiin jidh iyo hadh. Jidhka curiyaha wuxuu muujinayaa qiimaha wakhtiga furitaanka / xidhitaanka booska, hooska hoose wuxuu muujinayaa qiimaha ugu yar, kan sare wuxuu muujinayaa ugu badnaan muddada la cayimay. Midabka cad ama cagaarka ee cunsurka jidhkiisu waxa uu tilmaamayaa korodhka qiimaha marka la barbardhigo xilligii hore, midabada madow ama casaanka ayaa tilmaamaya in qiimaha hantida uu hoos u dhacay.
Shaxda khadka tooska ah waa soo bandhigid garaaf ah oo xigashooyinka wakhtiga dhabta ah. Qalabkan multifunctional ee qaab ku habboon ayaa kuu ogolaanaya inaad falanqeyso isbeddellada suuqa ee jira.
Waqtigu waa wakhtiga fulinta qandaraaska, taas oo ah, muddada dhamaadka kaas ama inta lagu jiro shuruudaha ugu muhiimsan ee ikhtiyaarka binary waa in la buuxiyaa. Waxaa muhiim ah in la doorto waqtiga saxda ah ee dhicitaanka, taas oo ah, in la xisaabiyo tirada wakhtiyada inta lagu jiro muddada aad sugeyso dhaqdhaqaaqa suuqa qaarkood, oo ku saleysan falanqaynta farsamada iyo aasaasiga ah .
Volatility waa tilmaame maaliyadeed oo xisaabiya oo tilmaamaya xiisaha qiimaha hantida. Erayada fudud, marka uu sareeyo isbedbedelka qiimaha hantida, ayaa sare u kaca isbeddelkiisa. Go'aaminta heerka isbeddelka waxay ka caawisaa ganacsadaha inuu miisaamo khatarta maalgashiga oo uu qiimeeyo xaaladda dhaqaale ee suuqa. Suuqyada leh isbedbeddelka qiimaha sarreeya iyo kuwa hooseeya waxay u baahan yihiin hab-dhaqan ganacsi oo kala duwan.
Tilmaamaha isbeddelka ee codsiga vfxAlert wuxuu ku yaalaa dashboards. Isticmaal jaangooyooyinka dashboard-ka si aad u go'aamiso isbeddelka hantida la falanqeeyay wakhtiga dhabta ah.
Dareeraha waa sifada hantida, taas oo go'aamisa sida ugu dhakhsaha badan ee loo iibin karo iyada oo wali la ilaalinayo qiimaha suuqa. Unugyada lacagta dareeraha ah waa EURO iyo USD tan iyo markii ganacsiga adduunka ee labadan qaybood ee lacag bixinta uu yahay ilaa 80%.
Tilmaamayaasha ikhtiyaarrada binary waa algorithms gaar ah oo falanqeynaya xogta tirakoobka waxayna ka caawiyaan ganacsatada inay si macquul ah u falanqeeyaan suuqa oo ay go'aamiyaan dhibcaha gelitaanka ugu fiican. Waxaa muhiim ah in la fahmo in tilmaamayaasha aysan muujin mustaqbalka, waxay qaabeeyaan xogta hore - waxa ku dhacay suuqa ka hor intaadan go'aan gaarin. Tilmaamayaasha badankood waxaa loo qaybin karaa laba nooc: isbeddel iyo oscillator. Tilmaamayaasha isbeddelku waxay diiwaangeliyaan oo xaqiijinayaan jiritaanka isbeddelka, halka oscillators ay muujinayaan isbeddelka isbeddelka waxaana loo isticmaali karaa in lagu saadaaliyo isbeddelka suuqa.
Dashboard-ka vfxAlert waxa ku jira tilmaamayaasha falanqaynta farsamada ugu caansan oo si habboon loogu soo bandhigay qaab garaaf:
Waqtigu waa 1,5,15 iyo 60 daqiiqo
Tusiyaha Dhibcaha Pivot wuxuu saadaaliyaa taageerada suurtagalka ah iyo heerarka iska caabinta waqtiyo kala duwan.
Guddiga Kooban iyo Tusiyaha Bulls & Bears waxay muujinayaan habdhaqanka iibsadayaasha iyo iibiyayaasha suuqa.
Tusiyaha RSI waxa uu tusinayaa aagga ay hantidu ku taal: aagga la-iibsaday ama la-iibsaday.
CCI waxay cabbirtaa xoogga dhaqdhaqaaqa qiimaha
Isbeddellada ayaa muujinaya xoogga iyo dib u noqoshada isbeddelka
Isbeddelku wuxuu go'aamiyaa dhaqdhaqaaqa suuqa ee hadda jira